Maalinta: Abriil 25, 2017
Xaaladda ugu dambaysa ee mashruuca tareenada fudud ee Van
Xaaladda ugu dambeysa ee mashruuca nidaamka tareenka fudud ee Van: Guddoomiyaha Van iyo kuxigeenka Duqa Magaalada Caasimadaha Magaalada Taşyapan waxay ku dhawaaqeen mashaariicda in la fulin doono sanadka 2017. Iyada oo laga fulinayo mashaariicda ay hirgalineyso Dowladda Hoose ee Magaalada 'Van Metropolitan District' [More ...]
Burburtay Wareegyada Batman
Deegaanka ku wareegsan waddooyinka xirmooyinka ee Batman waxaa laga nadiifiyey qashinka: Qashinka lagu sameeyay agagaarka jidadka tareenka ee loo yaqaan 'FDY', oo ka mid ah waddooyinka gaadiidka magaalada, waxaa nadiifiyay kooxaha ku xiran Maareeyaha Waaxda Nadiifinta Dawladda Hoose. Ku dhawaad ​​degmada dhexdeeda [More ...]
Bozankaya taraamyada adeegga Kayseri
Bozankaya taraamyada adeegga Kayseri: Dowladda Hoose ee Magaalada Kayseri Bozankaya Iyada oo la raacayo heshiiskii u dhexeeyey "30'un tram" wuxuu bilaabay inuu u adeego Kayseri. Boqolkiiba 100 hoose Bozankaya taraamyo ayaa la geeyay Dawlada Hoose ee Magaalada Kayseri. [More ...]
TCDD 3. Booqo Cadde buclu oo ka socda Agaasime goboleedka
TCDD 3. Booqashada Agaasimaha Gobolka ee Seçkin Mutlu: TCDD 3. Maareeyaha gobolka iyo xubin ka tirsan guddiga 'SBimAN Selim Koçbay wuxuu booqday ManagerZBAN Maareeyaha Guud Seçkin Mutlu xafiiskiisa. TCDD 3. Maareeyaha Gobolka [More ...]
Samsun Sarp Tareenka maaha riyo
Tareenka Samsun Sarp Riyo ma ahan: Gudoomiyaha Golaha Magaalada Rize Metin Topçu, “Samsun Sarp Railway ma ahan riyo, gündem wuxuu sheegay in Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan uu ku siiyay warka wanaagsan ee tareenka xawaaraha dheereeya oo ka imanaya Samsun ilaa Ankara. [More ...]
Bas ka nadiifsan IETT, ololaha socdaalka ee faraxsan
Bas bas nadiif ah oo ka socda IETT, safar safar farxad leh: Booqasho ka socota İETT ilaa studentscadiye Ardayda Dugsiga Hoose ee diyaarinta halkudhigyada loogu talagalay isticmaalka basaska nadiifka ah. Maareeyaha Guud ee IETT Hasan Özçelik, gaadiidka dadweynaha [More ...]
TCDD ayaa ka gudbi doonta arimaha ay ka buuxsamaan
TCDD waxay ka adkaan doontaa dhibaatada xad-dhaafka: Laga soo bilaabo isgoyska DSI ilaa buundada Gültepe, TCDD waxay u sawiri doontaa labada dhinac dariiqa tareenka. [More ...]
23 Abriil Trambus wuxuu kuyaala Magaalada oo la socda rakaabka dadka yaryar
23 Abriil Trambus ayaa Magaalada ku booqday Rakaabkiisa yar-yar: MOTAS waxay carruurta ka dhigtay inay dalxiis ku tagaan magaalada iyadoo ay ugu wacan tahay 23 April ee Qaranimada iyo Maalinta Caruurta. Sannad walba 23 ayaa carruurtu ku soo booqdaan iyaga oo raacaya trambus bishii Abriil [More ...]
Ciyaarta halista ah ee taraamka ee Izmir: Izmir Karşıyaka Saldhigga tareenka ee Alaybey-Mavişehir ee ku shaqeeya degmada oo ay duubtay kaamiro hiwaayadda leh ayaa qalbiyadii afka gelisay. 2 cunugga ayaa ku dhejinaya gaariga ugu dambeeya ee taraamka safarka ah [More ...]
Rugta Tareenka ee Denizli Sarayköy ayaa dhacay
Denizli Sarayköy Railway Rails Lorry ayaa ku dhacay: Denizli degmada Sarayköy ee darawalka gaariga ayaa lumiyay kontaroolka gaariga xamuulka. Marka loo eego macluumaadka la helay; Safka 05.30 ee subaxnimadii shilku wuxuu ka dhacay magaalada Sarayköy Denizli maanta. Saraykoy [More ...]
RayHaber 25.04.2017 Warbixinta Shirka
Casriyeynta Dhismaha Sanduuqa Biyaha ee Shirkadda Goobta Ganacsiga ayaa la siin doonaa (TÜLOMSAŞ) Adeegga Cunnada waxaa la siin doonaa Gaadiidka Isgaadhsiinta waxaa laga iibsan doonaa Nidaamka Isgaadhsiinta Isticmaalka Tartanka (Tender)
Mashruuca Shanlıurfa Trolleybus Project Completed
Kireynta Mashruuca Sanliurfa Trolleybus: Mashruuca Trolleybus (Trambus), oo lagu soo daro barnaamijka maalgashiga ee 2017 ee Magaalada Sanliurfa ee Magaalada Magaalo Weyn, ayaa la dejiyay shalay. Aagga Ilaalinta Dhaqanka iyo Dabiiciga ee Sanliurfa [More ...]
Samulas Inc. Waxay ka shaqeysaa Samsun iyada oo awoodeeda oo dhan
Samulaş A.Ş. Waxay u shaqaysaa Samsun iyada oo leh awooddeeda oo dhan: Samulaş A.Ş. saraakiishooda ayaa albaabadooda furtay Samsunhaber.com'awa waxay bixiyeen macluumaad kusaabsan arimo badan oo waxbadan ka tari kara taraamyada. Samulaş A.Ş. Maareeyaha guud Kadir Gürkan iyo Dayactirka [More ...]
Istambuul waxay taageertaa la dagaalanka gaaska cagaaran ee la dagaallamaya Metro: Golaha La-talinta ee Dawladaha Hoose ee UNACLA Kulan ka bilaabmay Istaanbuul oo uu shir gudoominayo Kadir Topbaş Golaha La-talinta ee Dawladaha Hoose ee UNACLA Kulankii UNACLA ee lagu qabtay Istanbul Tarabya Hotel [More ...]